မြားများ: July 2014
ဂျောန်ဘယ်ရီမင် နဲ့ အိပ်မက်တေး (မြင့်သန်း)
ဂျောန်ဘယ်ရီမန် John Berryman ကို ကျွန်တော်ဖတ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်သုံးဆယ်ကျော်ကျော်လောက်က သိပ်မငြိဘူး။ မငြိရတာက ကဗျာဆိုတာဖတ်(ကြည့်)ရတယ်ဆိုတဲ့ အသိလောက်ပဲ ရှိခဲ့လို့။ ဖတ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့လည်း ဖတ်ကြည့်တာပဲ။ လွယ်လွယ်ပြောရရင် ကဗျာက ဘာကိုဆိုလိုတယ်။ ကဗျာရေးတဲ့လူက ဘာကို ဆိုချင်တာပဲ၊ ဆိုတာတွေကို ရှာမတွေ့ဘူး။ ကဗျာဖတ်တယ်ဆိုတာ စာလုံးတွေကို လိုက်ဖတ်ကြည့်တာပဲဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးတော့ လက်ခံသင့်တယ်လို့လည်း မထင်ဘူး။ Uncreative ဆိုတာကို နားလည်လွဲလာကြတဲ့အခါ ကဗျာဟာ ဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးလို့ အနက်ယူတဲ့လူငယ်တွေ ပေါ်လာတယ်။ ဖန်တီးစာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကဗျာဟာ ဖန်တီးစာမဟုတ်ဘူးရယ်လို့ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာတစ်ခုပဲ။ လူ့အသိ၊ သိမှု၊ သိနားလည်မှုရဲ့အားထုတ်မှုမပါရင် ကဗျာမှမဟုတ်ဘူး။ အိမ်သာနံရံမှာရေးဖို့ စာတစ်ကြောင်းတောင် မဖြစ်ဘူး။ ခုနောက်ပိုင်းပြောလာကြတဲ့ အနက်ဟာ စာလုံး၊စကားးလုံးရဲ့ နောက်မှာ ဆိုတာကိုသာကြည့်၊၊ ကဗျာဆိုတာ စာလုံး၊ စကားလုံးတွေ ထင်ရာစီချထားတာမဟုတ်ဘူး။ ဘာသာခြားစာလုံး၊ စကားလုံးတွေကို ကိုယ့်ဘာသာစကားထဲမှာ အတင်းမွေးစား၊ ကိုယ့်ဘာသာစာနဲ့ ပြန်ရေး Transliteration၊ တကယ်တော့ ကဗျာဆိုတာက ကဗျာဖတ်သူတွေကို ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ သဘောထားပြီး ထွေပြားခိုင်းထားတာမဟုတ်ဘူး။ ပါမောက္ခဟာဟစ်ရ်ှရေးသလို ဘယ်လိုစနစ်၊ နည်းပညာအခံနဲ့ ရေးရး ဖတ်သူဆီရောက်မလာတဲ့ ကဗျာဟာ တစ်နေရာရာမှာ ပျောက်နေလို့ပဲ။ဘယ်ရီမန် ကဗျာတွေဟာ ကဗျာရေးသူရဲ့ ပါဝင်ပတ်သတ် (ရ)ခဲ့တဲ့ ကာလ၊ ဒေသ၊ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ခဲ့လေတော့၊ စာလုံးရွေးချယ်သုံးစွဲပုံတွေက ကောင်းတယ်။ ဘယ်ရီမင်ရဲ့ ကဗျာတွေနဲ့အတူ ကျောထောက်နောက်ခံအကြောင်းတွေ၊ သူတို့ကဗျာတွေအကြောင်း ပညာရှင်တွေ၊ နားလည်တဲ့လူတွေ ပြောကြတာတွေကို ကြိုးစားပြီး နားထောင်မိတယ်။
တနေ့တော့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုက ကထိကမလေးပြောတဲ့ ဘိ ကဗျာအကြောင်း နားထောင်ပြီး သူပြောတဲ့အထဲမှာ ပါတဲ့ ဂျောန်ဘယ်ရီမန်အကြောင်း မေးကြည့်မိတယ်။ သူကလည်း ဘယ်ရီမင်ကဗျာတွေမှာ ကျောထောက်နောက်ခံအကြောင်းတွေ သိရင် ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောရမှာပဲ။ အထူးသဖြင့် ဘယ်ရီမင်ရဲ့ ပထမပိုင်းကဗျာတိုတွေ၊ အဲဒီနောက်ရေးတဲ့ ကဗျာရှည်နဲ့ နောက်ပိုင်းရေးတဲ့ ကဗျာတွဲတွေဟာ ပုံစံအရ၊ အကြောင်းအရာအရမတူဘူးတဲ့။ ဒီအချက်ကတော့ လက်ခံရမှာပဲ။ ဘာသာစကားမတူ၊ လူမျိုးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအခြေခံမတူသူတွေအကြားမှာ ဘာသာစကားအခြေခံနားလည်ပုံက ကွာတယ်။ စာဖတ်တတ်တိုင်း ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လို့တော့ဖြစ်တယ်။ ကဗျာက ဘာကို ဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုတော့ သိချင်မှ သိမယ်။ လွယ်လွယ်ဥပမာပြောရရင် မောင်နွယ်ထွဋ်ရဲ့ တိုက်ကားလည်းမရ/ ဆိုက်ကားခ ရှိတဲ့အခါ/ ဟင်္သာတပေတရာ/ ပျော်စရာပါ ဆိုတာကိုသာကြည့်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေအတွက်တော့ ပြဿနာမရှိဘူး.။ ကဗျာရေးတဲ့လူက ပြထားတာတွေကို ကျွန်တော်တို့ သိမှတ်နားလည်ခံစားနိုင်တဲ့ အထဲကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးနဲ့ ပျော်ဝင်သွားတယ်။ ဒါပေတဲ့ ဘာသာစကားမတူတဲ့ လူမျိုးခြားတစ်ယောက်က မြန်မာဘာသာစကားကို ဖတ်တတ်၊ ရေးတတ်ရုံနဲ့ ဖတ်ကြည့်ရင်တော့ တိုက်၊ ကား နဲ့ ဆိုက်ကားခ ယှဉ်ပြထားတာဟာ အလကားပဲ။ ဒိပြင် အကြောင်းမသင့်ရင် ဟင်္သာတ၊ ပေတရာဟာ One Hundred Feed ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်။(၁)(တခါက ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ တကယ့်ဖြစ်ရပ်။ မြန်မာစကား/စာတတ်တဲ့ လူမျိုးခြားတစ်ယောက်က …ကြက်ညီနောင် ရေမှာမျော..ဆိုတာကို …two chicken brothers floating in the water လို့ ရေးတာကို ဖတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ မကြာခင်ကတင် ဖတ်ရတဲ့ သန်းစိုးနိုင်ဆိုသူ ရေးတဲ့အထဲမှာ Spit at each other ကို …အပြန်အလှန်တံတွေးဖြင့် ထွေးကြပုံ…လို့ အနက်ပေါက်ပုံမျိုးဖြစ်မယ်။) ဒီတော့ ဘာသာစကား၊ ဘာသာစာမတူတဲ့ အရေးအသားတစ်ခုကို ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ သိရုံက မခက်ပေတဲ့ သိမှတ်နားလည် ခံစားနိုင်တဲ့ အပိုင်းကျ ခက်နေတတ်တယ်။(ဘယ်ရီမင်ကဗျာထဲက အချက်တစ်ခု နောက်နားမှာ ထပ်ညွှန်းပါ့မယ်။ တသားတည်မကျဘူး။ ကဗျာကတော့ အခက်ဆုံးပဲ နေမယ်။ သဘာဝတရားအခြေခံ အဖွဲ့အစပ်တွေက၊ နေ့စဉ်ဘဝအခြေခံအဖွဲ့အစပ်တွေထက်ပိုပြီး သိမှတ်ခံစားနားလည်လွယ်တယ်။ အကြောင်းကတော့ သဘာဝတရားနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သိမှုဟာ ပိုပြီး ယေဘုယျဆန်သဘောဆောင်နေလို့ပဲ။
ဒီလိုနဲ့ ဂျောန်ဘယ်ရီမင်ကို ပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုတော့လည်း သိပ်မဆိုးလှဘူး။ သူရဲ့ အိပ်မက်တေးတွေ Dream Songs ကိုဖတ်လို့ သဘောတွေ့လာတယ်။ ၇၇ အိပ်မက်တေး ဆိုတဲ့ ကဗျာစာအုပ် (77 Dream Songs) က ၁၉၆၄ မှာ ထွက်တယ်။ ကဗျာအတွက် ပူလစ်ဇာဆုရတယ်။ အိပ်မက်တေးတွေကို သဘောတွေ့လာတယ်လို့ ဆိုတာကလည်း သူ့နောက်ကြောင်းကလေးတွေ သိထားရလို့ပဲ။ သိပ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ ကဗျာထဲက ဟင်နရီ Henry ဆိုတဲ့ဇတ်ကောင်အကြောင်း၊ ဟင်နရီကို မသိရင် အိပ်မက်တေးတွေ ဘယ်လိုမှ အရာထင်မလာနိုင်ပါဘူး။ ပထမဆုံး ကဗျာမှာ ဘယ်ရီမင်ဟာ ဟင်နရီကို ပုံဖော်ထားတယ်။
စိတ်ထွက်နေတဲ့ ဟင်နရီက တနေ့လုံးကို ရှောင်နေတယ်၊
ညှိမရတဲ့ ဟင်နရီ စိတ်ကောက်နေတာ။
ငါကတော့ သူ့သဘောသိတယ်။ ခြေရာကောက်ကြည့်လိုက်တယ်…
လို့ ရေးပြီး စ ထားတယ်။ နောက် ဒုတိယအပိုဒ်မှာ….
နောက်တော့ ခွဲခွာစရာတစ်ခု ဖြစ်လာတယ်…
လို့ရေးပြီး ဟင်နရီရဲ့ အနေအထားပြောင်းသွားရတာကို ဖော်တယ်။ အရင်ကတော့ ဂွမ်းကပ်ကြီးလို၊ နွေးထွေးနေတာ၊ နောက်တော့ လမ်းခွဲကြရတယ်။ ကမ္ဘာကြီးက သူ့ဘက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီတော့…
အခု သူက ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာ ဘယ်လိုဖြစ်လာမှာကို
အရှည်အကျယ် သိစရာတွေ ပြောပြတော့မှာ….(၂)
((၂) မြန်မာဘာသားစကားအခြေခံနဲ့လွယ်လွယ် ထိ နိုင်တဲ့စာလုံးတွေသုံးပြီး မြန်မာလိုပြန်ရေးထားတာပါ။ ဥပမာ အင်္ဂလိပ်လို hid tha day လို့ရေးတာကို မြန်မာလို လုံးချင်းပြန်ရေးရရင် နေ့တစ်နေ့ကို ဝှက်ထားတယ်လို့ရေးရမှာပဲ။ဒါပေမယ့် သူဆိုလိုတာက ဟင်နရီက ရှောင်နေတာ။ တကယ်ရေးထားပုံက…Henry hid the day လို့ Hid နဲ့ the day ကြားမှာ ခြားထားသေးတယ်။ သူတို့ဘာသာစကား တည်ဆောက်ပုံအရ အရသာရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားမှာ ဘယ်လိုမှ အရသာမရှိဘူး။အတင်းအဓမ္မပုံတူကူးချရင်တော့ ဘာသာစကားအခြေခံနဲ့ မျောက်ပြဆန်တောင်းမှုတစ်မျိုးပဲဖြစ်မယ်။ ဘာသာစကားဟာ ပြည်ကြီးဒါလီလို ကြုံရာနဲ့ဝင်အိပ်တာမျိုး မလုပ်ဘူး။) လို့ရေးထားတယ်။ ဟင်နရီဟာ ဘယ်လိုလူ၊ ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပျိုးထားတယ်။ ဟင်နရီရဲ့ ရုပ်အခြေခံအနေအထား (…ရှောင်နေတယ်) နဲ့ စိတ်အခြေခံအနေအထား (…စိတ်ကောက်နေတယ်) ကိုပြထားတယ်။ ဟင်နရီရဲ့ အနေအထားပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြတ်ပျက်နေတာတွေ။ ရေးထားတာတွေကို သေသေချာချာဖတ်ကြည့်ရင် ဘဝကို မှတ်တမ်းတင်ထားသလိုပဲ။ ဟင်နရီဟာ ကဗျာရေးတဲ့လူရဲ့အသံ၊ ဇာတ်ကြောင်းပြောနေတဲ့လူက ဦးတည်ရည်ညွှန်းပြောနေရတဲ့လူပဲ။
ဘယ်ရီမင်နဲ့ အပြန်အလှန်စကားပြော ဆွေးနွေးချက်တစ်ခုမှာ (Haroard Adoocate ထဲမှာ ) ဘယ်ရီမင်က ပြောတယ်။ ဟင်နရီက ကျွန်တော်နဲ့ တူတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ဟင်နရီနဲ့တူတယ်။ ဒါပေတဲ့ တစ်ဘက်ကနေ ပြောရရှုတော့ ကျွန်တော်ဟာ ဟင်နရီမဟုတ်ဘူး။ သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ကျွန်တော်က အမြတ်တော်ကြေးပေးရတယ်။ ဟင်နရီက မပေးရဘူး။…တဲ့။ တကယ်တော့ ဆိုလိုချငတာက ဟင်နရီဟာ စာပေအရ (ကဗျာအဖွဲ့အစပ်အရ) တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဂျောန်ဘယ်ရီမင်ပဲ။ ကဗျာနဲ့ တည်ဆောက်ဖော်ထုတ်ပြထားတဲ့ ဟင်နရီက မျက်နှာအမည်းနဲ့ အမေရိကန်လူမျိုး(လူဖြူ)။ ဘဝမှာ ဘယ်လိုမှပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ထားရတဲ့ လူ။ ဒါပေတဲ့လည်း ဘယ်လို ဆုံးရှုံးမှုရယ်လို့ ဘယ်ရီမင်က ဖော်ပြမထားခဲ့ဘူး။ လူမဲ လို့ မရေးဘဲ မျက်နှာအမဲနဲ့လူ လို့ ရေးထားတာကိုကလည်း အကြောင်းတော့ ရှိတယ်။ သူတို့ဆီမှာ (အထူးသဖြင့် အမေရိကမှာ) လူဖြူက လူမဲအသွင်ဆောင်ပြီး သရုပ်ဆောင်တာ အသုံးတော်ခံတာရှိတယ်။ တနည်းအားဖြင့်တော့ လူမဲတွေရဲ့ စရိုက်ကို ယူပြီး လူဖြူက လူမဲအသွင်ဆောင်ပြီး ဖော်ထုတ်တာ။ တချို့ကတော့ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ Stage negro လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ဟင်နရီဟာ အရပ်တကာလှည့်သီဆိုနေတဲ့ သီချင်းသည် minstreal သဘောပဲ။ ဒိပြင် ဟင်နရီဟာ အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်။ ဟင်နရီဟာ တစ်သမတ်တည်းဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားမှာမဟုတ်ဘူး။ ဟင်နရီဟောက်စ်..Henry house၊ ဟင်နရီဟန်ကိုဗစ်ခ်ျ Henry Hankovitc၊ ဆာဟင်နရီ Sir Henry …စသဖြင့် အမျိုးမျိုးပဲ။ ဒိပြင် ဟင်နရီဟာ လူသတ္တဝါ အဖြစ်နဲ့ချည်းမဟုတ်ဘူး။ ကြောင်၊ သမင်၊ ဟယ်လီကော်ပတာစတဲ့သတ္တဝါ/ အရာဝတ္ထုတွေအသွင်ကိုလည်း ဆောင်ပြီး ကဗျာထဲမှာ ပေါ်လာတယ်။ဒီတော့ အဲဒီလိုမျိုး အချက်အလက်ကလေးတွေကို သိထားရင်ဖြင့် ဘယ်ရီမင်ရဲ့ ကဗျာတွေဟာ ပိုပြီး ပုံပေါ်လာပါတယ်။
အိပ်မက်တေးကဗျာတွေထဲမှာ မစ်စတာဘုန်း(စ)Mr.Bones ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်လည်း ပေါ်လာတတ်တယ်။ သူက အမေရိကန် လူမဲတွေပြောလေ့ရှိတဲ့ အသံထွက် အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ပြောတယ်။ ဘယ်ရီမင်က အဲဒီအသံထွက် အသုံးနှုန်းတွေ သုံးပြီး မစ်စတာဘုန်း(စ)ကို ဖော်လေ့ရှိတယ်။ သူကလည်း ကဗျာရေးတဲ့ လူကိုယ်စားဝင်ပြောပေးနေတဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ်ခုပဲ။ အနောက်တိုင်းကဗျာ ဖန်တီးစာ…စတဲ့အရေးအသားတွေထဲ ရေးတဲ့လူက သူ့ကိုယ်စား (အခြားအသံတစ်ခု)ထည့်ပြီး ဖန်တီးတတ်တာကတော့ မဆန်းဘူး။ အိပ်မက်တေး နံပါတ်(၂)မှာ ကတည်းက စပြီး မစ်စတာဘုန်း(စ)ကို ဆာဘုန်း(စ)ရယ်လို့ ရည်ညွှန်းပြီး ဖော်လာခဲ့တယ်။ အိပ်မက်တေး ၇၆ (ဒီကဗျာက ဟင်နရီရဲ့ ဝန်ခံချက် လို့လည်း တွင်တယ်။)မှာတော့ ဟင်နရီက မစ်စတာဘုန်း(စ)ကို တိုင်တည်ပြီးပြောတယ်။ ဥပမာ…
လောလောဆယ် ကျုပ်မှာ သိပ်ဆိုးဆိုးရွားရွားတွေ မဖြစ်ဘူး။
ဘယ်လိုရှင်းပြရမှာတုံး၊ ကျုပ်ရှင်းပြမယ် မစ်စတာဘုန်း(စ)ရယ်…
လို့ စခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ အဆုံးမှာလည်း မစ်စတာဘုန်း(စ)ကို ဦးတည်ပြောရင်း ဆုံးတယ်။
ခင်ဗျားရဲ့ ဘယ်ခြေကို ကျုပ်ရဲ့ ညာခြေနားထား
လက်ချင်းယှဉ်လို့ သာယာတဲ့ ပင်လယ်နဘေးဆီမှာ
----ဘယ်သူမှလာတာ ကျုပ်မတွေ့တော့၊ ကျုပ်ပဲ သွားလိုက်တော့တယ်။
ဘယ်ရီမင်ရဲ့ အလိုအရတော့ မစ်စတာဘုန်း(စ)ဟာ အနောက်တိုင်းစာပေထဲမှာ ဂန္တဝင်မြောက်တဲ့ စဗာန်တေး Cervantes ရဲ့ ဒေါန်ကေဟိုတေး Don Quixote ဝတ္ထုထဲကလို။ အဓိကဇာတ်ကောင်ကို အထောက်အပို့ပေးနိုင်တဲ့ အပြိုင်ဇာတ်ကောင် စန်ချိုပန်စာ Sancho Panza ကို ဖန်တီးထားသလိုပဲ။ ဒါကြောင့်ပဲ အိပ်မက်တေးတွေထဲမှာ မစ်စတာဘုန်း(စ)က ဟင်နရီပြောဆိုနေတုန်း ကြားဖြတ်ပြောတာမျိုး။ ဆင်ခြင်နည်းလမ်းတကျ ထောက်ပြထားတာမျိုး ပါတယ်။ ဘုန်း(စ)ရယ်လို့ ဖန်တီးဖို့ တခြားစိတ်ကူးကတော့ ၁၉၃၀ ခုနှစ်က ထုတ်တဲ့ Tambo and Bones ဆိုတဲ့ စာအုပ်က ရတာပဲ။
သိမထားရင် ကဗျာရဲ့ဆိုလိုရင်းမဟုတ်လို့ အရပ်ပြောနဲ့ပြောရရင် အရသာမပေါ်ဘူးလို့ ပြောရတဲ့အချက်ကို (ထပ်ပြီး) အထောက်အထားဖြစ်အောင် အိပ်မက်တေး ၄၇ ကို ပြချင်ပါတယ်။ အိပ်မက်တေး ၄၇ ဟာ April Fools Day, or, St.Mary of Egypt လို့လည်း ဆင့်ပွားနာမည်ပေးထားတယ်။ ဒီ April Fools Day ဆိုတာဟာ ရင်းရင်းမြစ်မြစ် ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကို မသိတာ၊ အကြမ်းထည်တော့ သိပြီးကြပြီးဖြစ်မယ်။ ဒီအပိုင်းတော့ မရှင်းတော့ဘူး။ ဒါပေတဲ့ အီဂျစ်က စိန့်မေရီ St.Mary of Egypt ဆိုတာကတော့ အကြမ်းဖျဉ်းသိဖို့လိုမယ်။ မသိခဲ့ရင် ရန်ကုန်မြို့က အလံပြဘုရားလမ်းထောင့်က စိန့်မေရီဘုရားကျောင်းလိုမျိုး မြင်မိကောင်း မြင်မိကြမယ်။ ဘယ်ရီမင်ရဲ့ အိပ်မက်တေး ၄၇ လည်း ဘာမျှအဓိပ္ပါယ်မရှိဖြစ်သွားမယ်။ ဒီ-ကဗျာ-မျိုးဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိအောင် ရေးထားတာမျိုးမဟုတ်လေတော့ ကဗျာဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်ရှိဖို့ မလိုဘူးရယ်လို့ ကြွေးကြော်ပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ ကဗျာမျိုးထဲမှာ မပါဘူး။ အီဂျစ်က စိန့်မေရီဆိုတာက နှစ်ပေါင်းများစွာက အီဂျစ်ပြည်က သဘင်သည်မ၊ ပြည့်တန်ဆာမ တစ်ယောက်။ ငွေကြေးထက် တဏှာရာဂမှာ တက်မက်မှုလွန်ကဲတယ်။ ဂျေရုစလင်ကို ဘုရားဖူးသွားတာတောင် ဘုရားဖူးခရီးသည်တွေကို ရာဂနဲ့ ဖျားယောင်းမွေ့လျော်ခဲ့တယ်။ ဂျေရုစလင်က ဘုရားကျောင်းကို ရောက်တဲ့အခါမှ သူ့ကို ဘုရားကျောင်းထဲကို အဝင်မခံဘူး။ အဝင်မခံတာက လူပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။ ပြောပြနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ အင်အား၊ စွမ်းအားတွေက ခုခံထားတာ။ သူ့ရဲ့ မကောင်းမှုအညစ်အကြေးတွေကို လက်မခံတဲ့ သဘောပဲ။ ဒီမှာတင် မိခင်တော်မြတ်မေရီကို အာရုံပြုပြီး ဆုတောင်းတယ်။ ဒီတော့ ညွှန်ကြားချက်ကို ကြားလာရတယ်။ သူ့ကို ဂျော်ဒန်မြစ်ရဲ့တဘက်ဆီက သဲကန္တာရထဲကိုသွားပြီး လေးဆယ်ခုနစ်နှစ်ကြာအောင် တကိုယ်တည်း အဝတ်မပါဘဲနေရမယ်။ အဲဒီနောက်မှ သူတော်စင် ဇိုစိမာ့(စ)နဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံရမယ်ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်ရလာတယ်။ ဒါက အီဂျစ်က စိန့်မေရီအကြောင်း။ အီဂျစ်က စိန့်မေရီအတွက် ကျင်းပတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုရက်က ဧပြီလနှစ်ရက်နေ့။ ဒါပေတဲ့ ဘယ်ရီမင်က သူ့ကဗျာထဲမှာ ဧပြီလတစ်ရက်နေ့ကို ပြောင်းလိုက်တယ်။ သူ့ကဗျာထဲက မေရီဟာ အီဂျစ်က စိန့်မေရီမဟုတ်ဘူး။ ဟင်နရီရဲ့မေရီပဲ။ မြုိ့ပြင်ကိုထွက်၊ လူနေရပ်ကွက်တွေကို ဖြတ် ရဲရဲတင်းတင်း ငါ့ရဲ့ သဲကန္တာရဆီ စွန့်ပြီး ဝင်လာခဲ့လို့ ဘယ်ရီမင်က ရေးထားတယ.်။ တနည်းအားဖြင့်တော့ ဘယ်ရီမင်က ယနေ့ကာလအတွင်းက လူ(ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ မော်ဒန်လူသား)ရဲ့ သမိုင်းအခြေခံဖြစ်ပျက်နေရခြင်းနဲ့ နေ့စဉ်ဘဝအတွေ့အကြုံတို့ကြားက ပဋိပက္ခဖြစ်နေရတဲ့အနေအထားပဲ။ ဒီနေရာမှာ အဓိကဆိုချင်တာက ဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတဲ့ ကဗျာပဲဖြစ်ဖြစ် စာလုံးတွေရဲ့နောက်က အနက်ကို သိဖို့တော့ လိုတယ်ထင်တာပဲ။ မသိခဲ့ရင်တော့ ကဗျာရေးသူရဲ့ အားထုတ်မှုဟာ ကဗျာဖတ်သူဆီ ရောက်မလာတော့ဘဲ အဝေးကို ထွက်သွားတဲ့ အနေအထားဖြစ်သွားမယ်။
ဒီလိုအချက်ကလေးတွေ သိထားရရင်ပဲ ဘယ်ရီမင်ရဲ့ ကဗျာ(ဘယ်ရီမင်မှ မဟုတ်ဘူး။ တခြားလူတွေ ရေးတာတွေမှာလည်း)ဖတ်တဲ့အခါတွေမှာ ပိုပြီးပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်လာတယ်။ (ရှေ့မှာညွှန်းခဲ့တဲ့ေ မာင်နွယ်ထွဋ် ကဗျာလိုပဲ။) ဒါပေတဲ့ ဘယ်ရီမင်ရဲ့ ကဗျာတွေအကြောင်းကို မြန်မာလိုပြန်ပြီးတင်ပြရာမှာ ရေးဟန်ကိုတော့ ထည့်ပြီး ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကာရန်၊ ဟန်..က သူတို့ပုံစံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ စာကြောင်းရေးအခြေခံနဲ့ စတန်ဇာ သတ်ပြောရမှာပဲ။ အင်္ဂလိပ်လို စတန်ဇာ Stanza (ယုဒဿန်အသံထွက်သလို မြန်မာမှုအသံထွက်နဲ့ ရေးရရင်ဖြင့် စတနဇ လို့ေ၇းရလေမလားပဲ။ အကောင်းဆုံးကတော့ သူ့အသံထွက်အရင်းကို မြန်မာစာနဲ့ ပြန်ရေးတာ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်မယ်။) ဟာ အစ်တာလျံကလာတာ။ လိုရင်းအနက်ကတော့ ရပ်တဲ့နေရာ ပဲ ကဗျာအဖြစ်ရေးသာားးတဲ့ စာကြောင်းရေပေါ်မူတည်ပြီး သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုတာတစ်ခုပဲ။ လေးကြောင်းတတွဲ စတန်ဇာကတော့ ပုံမှန်ပဲ တဆယ့်နှစ်ကြောင်းထက် ပိုတာကတော့လည်း ရေးရိုးရေးစဉ်မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်ရီမင်က ခြောက်ကြောင်း ရှစ်ကြောင်း သုံးပိုဒ်လောက်ရေးလေ့ရှိတယ်။ ဒီအပိုင်းနဲ့ ဝေါဟာရရွေးချယ်လပုံကို ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ ဆွေးနွေးနိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ဂွတ်မောနင်းကို ကောင်းသောမနက်ခင်းပါလို့ မြန်မာလို ရှာကြံဘာသာပြန်လိုက်ရတာကလွဲလို့ တကယ့်မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ဘယ်လိုမှ အချိန်မစီးတဲ့ အသုံးအနှုန်းမတည့်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခု ဖြစ်နေသလိုမျိုးပဲ ဖြစ်လာမယ်။( မကောင်းတဲ့ နံနက်ခင်း ဆိုတာက ဘယ်လိုဟာမျိုးတုန်းလို့ နယ်ဘက်ကျေးဘက်က စာဖတ်အားကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်က မေးတာခံရဖူးတယ်။) ကွန်စက်(ပ)Concept ဆိုတာကို ဘာသာစကားအခြေခံသိမှု ဖလှယ်ပုံအရရှင်းမပြနိုင်ဘဲ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာလုံးတွေ ဖျာခင်းပြီး ကွန်စက်(ပ)ကျူအလ်အတ် Conceptual Art ကို ရှင်းပြနေကြတာမျိုးပဲ ဖြစ်မယ်။
ဒါပေတဲ့အကြောင်းအရာအားဖြင့်တော့ ကျွန်တော်တို့ ပြောနိုင်တယ်။ စာလုံး၊ စကားလုံး အသုံးကောင်းတယ်။ လေ( အသံ၊ Toneကို ဆိုလိုတာ) ကောင်းတယ်။ သူ့ကဗျာတွေက သူ့အမြင်၊ သူ့အကြောင့်၊ သူ့ကို နားလည်လက်ခံထားတဲ့အကြောင်၊ ဒိပြင် သူ့ကိုယ်သူနဲ့ သူ့အရေးအသားတွေအပေါ် ဝေဖန်ထားတာတွေပါတယ်။ ဒီတော့လည်း အနောက်ဘက်မှာ ကဗျာတွေကို မျိုးတူစုပြတဲ့ Confessional Poetry ကဗျာမျိုးလို့ ခေါ်ရလိမ့်မယ်။ မြန်မာလို လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ ဝန်ခံကဗျာပဲ။ ကဗျာရေးသူက သူ့အမြင်ကိုချည်း ဖော်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ကိုယ်သူကိုပါ သူ့အမြင်နဲ့ ကြည့်မြင်ပြီး ဖွင့်ဟဝန်ခံတာပဲ။ တနည်းတော့ အဆိုပြုတယ်လို့ ပြောရလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ အဆိုပြုတယ် ဆိုတာကို ကဗျာအရေးအသားအရ ပေးတယ် ဆိုတာမျိုးနဲ့ မရောစေချင်ဘူး။ တချို့ ကဗျာအရေးအသားတွေမှာ ကဗျာရေးတဲ့ လူက ကဗျာဖတ်တဲ့လူကို ရစေချင်တာရှိတယ်။ ဒီတော့ ကဗျာရဲ့ စာကြောင်းတွေနဲ့ ပေးတယ်။ ပေးတာဟာ တင်ပြတာပဲ။ အဆိုပြုတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကဗျာဆရာတွေနဲ့ နမူနာပြရရှု ဝေလျာမ်ကားလို့(စ)ဝေလျာမ်(စ)ရဲ့ ကဗျာတချို့က ပေးတာ။ ဘယ်ရီမင်လို့ အဆိုပြုမထားဘူး။ အကြမ်းထည်ဥပမာပေးရရင် ဝေလျာမ်(စ)ရဲ့ Picture from Brueghel ကဗျာတွေထဲက ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူကား Self Portrait ကဗျာထဲက တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်း မြန်မာလို ပြန်ရေးပြချင်တယ်။ ဝေလျာမ်(စ) က…
အဲဒီလိုမျိုး ကဗျာဖတ်တဲ့လူကို ပေးထားတာ။ ကဗျာဖတ်တဲ့လူက အဲဒီအတိုင်း လက်ခံရယူဖို့၊ လက်ခံရယူဖို့ ဆိုရာမှာ ဆက်ပြီးအနက်ဖော်စရာမလိုပဲ လိုက်သွားဖို့ (နောက်ထပ် နမူနာအဖြစ် ဖတ်ကြည့်ချင်ရင် ဝေလျာမ်(စ)ရဲ့ ToaPoor Old Woman ကိုရှာဖွေဖတ်ကြည့်ကြစေချင်တယ်။ An Early Martyr ထဲမှာ ပါတယ်။ ၁၉၃၅ ခုနှစ်က ထုတ်တာ) ဝေလျာမ်(စ)ရဲ့ အရေးပုံစံကိုက လိုက်ပါသွားဖို့ပဲ။ ဒါပေတဲ့ ဘယ်ရီမင်က ရှုခင်းတစ်ခုကိုရေးတော့….
တုတ်ရှည်ကြီးတွေနဲ့ အမဲလိုက်ခွေးတွေနဲ့ လူသုံးယောက်ဆင်းလာလေရဲ့
ကောက်ရိုးခြောက်တွေ မီးရှို့ထားတဲ့နားဆီက လူရိပ်ငါးခုကိုကျော်လို့
လို့ရေးထားတယ်။ ဒီကဗျာက သူ့ရဲ့ ဆောင်းရှုခင်း Winter Landscape လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ကဗျာက။ သူက ဝေလျာမ်(စ)ရေးသလို ဖတ်တဲ့လူက လိုက်လာဖို့ မလိုဘူး။ တချီတည်းနဲ့ အပြီးပြောထားလိုက်တာ။ အပြီးပြောထားလိုက်တဲ့အတွက် အနက်ယူတတ်ဖို့လိုလာတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ကဗျာရေးပုံတွေမှာ ရေးတဲ့လူက ဘယ်လိုအနေအထားနဲ့ ပြောတယ်ဆိုတာက မတူကြဘူး။
အိပ်မက်တေး တွေဟာ ဘယ်ရီမင်ရဲ့ ဖန်တီးစာပဲ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ သူနဲ့ အတူတူနေနေတဲ့ ကဗျာဆရာ မယ်ရဒစ် William Meredith က ဘယ်ရီမင်ရေးပုံကို ရေးပြခဲ့ဖူးတယ်။ ဘယ်ရီမင်က တစ်ညလုံးရွတ်လိုက် ရေးလိုက် ဖတ်လိုက်၊ ဘာဘွန်(အမေရိကန်ဝီစကီ)သောက်လိုက်၊ ဆေးလိပ်သောက်လိုက်နဲ့၊ တခါတလေ မနက်လေးနာရီလောက်ထိ သူ့ဘာသာ ကဗျာရွတ်နေတာကို ကြားနေရတယ်တဲ့။ ကနဦးတုန်းကတော့ ဘယ်ရီမင်မှာ ဒီကဗျာတွေကို စုစည်းတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်(အတွေးပဲဆိုပါတော့) မရှိခဲ့ဘူး။ သူရေးထားတာတွေက သူ့ဘဝထဲက ထွက်လာတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ မကျေနပ်တာ၊ ဒေါသထွက်စရာ၊ အားလုံးပဲ အဲဒီအချိန်က သူကိုယ်တိုင်လည်း ဦးတည်ရာမဲ့နေသလို သူ့ကဗျာတွေကလည်း ဦးတည်ချက်တစ်ခု ရှိမနေခဲ့ဘူး။ ဒါပေတဲ့ကစဉ့်ကလျားဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကဗျာတွေကို သူ့ဘာသာ ပြန်တည်းပေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ ၇၇ အိပ်မက်တေးဆိုတဲ့ သူ့ကဗျာစာအုပ်ထွက်လာတယ်။ အိပ်မက်တေး ကဗျာတွေအပြည့်အစုံကတော့ နောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့ သူ့ရဲ့ His toy, His dream, His Rest ဆိုတာထဲမှာ ပါတယ်.။ ကဗျာတွေဟာ ကာလအပိုင်းအခြားကန့်သတ်ပြီး စီစဉ်ပုံနှိပ်ထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ အနောက်နိုင်ငံရေးပုံစံထဲက Media res ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ စာအုပ်ကို စထားတယ်။ အဲဒါက ဖန်တီးစာအရေးအသားတွေမှာ စ-လယ်-ဆုံး သုံးပါး ညီညွတ်မှုစနစ်ကို မသုံးတော့ဘဲ အလယ်ကနေ(ကြားတနေရာရာကနေ) စတဲ့ဖန်တီးမှုအပြုအမူပဲ။ အိပ်မက်တေးတွေကို ရေးတာ ဆယ့်တစ်နှစ်ကြာတယ်လို့ သိရပေမယ့် အဲဒီလိုရေးလာနိုင်ဖို့ ဘယ်လောက်ကြာအောင် အားထုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့ ပြောနိုင်ကြမှမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုပဲ ကဗျာစာအုပ်ဖြစ်လာတော့ စာအုပ်ထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပထမပိုင်းနဲ့ နောက်ဆုံးအပိုင်းကြားမှာ ကာလအားဖြင့် ဘယ်လောက်ခြားခဲ့တယ်ဆိုတာကို မပြောနိုင်ကြဘူး။
အိပ်မက်တေးထဲက ကဗျာတချို့မှာ ထူးခြားတဲ့အပိုင်းတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်မြင်မိတာက (ကျွန်တော့်အမြင်သက်သက်ဖြစ်လို့ မှားချင်လည်း မှားမယ်) ကဗျာတွေရဲ့အဆုံးသတ်ဟာ ရသအမြင်(ရသဖြစ်ပေါ်စေမှုတစ်စုံတစ်ရာ)အတွက် ရပ်တန့်ပစ်လိုက်သလိုပါပဲ။တနည်းပြောရရင် ဖန်တီးစာအရးအသားမှာ ရေးသားထားတဲ့ အရေးအသားကို ချုပ်လိုက်ချင်လို့ပဲ၊နောက်ထပ်ဖန်တီးမယ့်အရေးအသားတခုခုမှာ သီခြားတစ်ခုခုကိုပြောချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးအသားကို တန့် ထားလိုက်တာရှိတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ခပ်လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ Statis ပဲ။ အရေးအသားဟာ ဆက်ပြီးမဖွံ့ဖြိုးတော့ဘူး။ ဒီနေရာမှာ ရပ်ထားတာနဲ့ ပြီးသွားတာကို ကွဲပြားစေချင်တယ်။ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဟာ ပြီးသွားတာရှိသလို ရပ်ထားတာလည်း ရှိတယ်။ ရပ်ထားတာမှာ ရသသဘောမှာအခြေခံတဲ့ ဆင်ခြေတစ်စုံတရာ (Reasons for aesthetics လို့ လွယ်လွယ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်) ကြောင့် ရပ်တာ။ လက်ညောင်းလို့ ရေးနေတာကို ရပ်ပစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ လွယ်လွယ်နမူနာ ပြရရင် ကဗျာလောက စုစည်းမှု-၁ မှာ ပါတဲ့ နေမျိုးရဲ့ နေ့လည်ခင်း ကဗျာအတွဲကို ကြည့်စေချင်တယ်။ နေ့လယ်ခင်းကဗျာ အတွဲရှစ်ပုဒ်ဟာ ဘယ်ရီမင်ရဲ့ အိပ်မက်တေး ကဗျာတွေလို စည်းရိုးမဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အခြေခံမျိုးမဟုတ်တာက လွဲလို့တော့ ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားပုံက ခပ်ဆင်ဆင်ပဲ (ခပ်ဆင်ဆင်ပဲလို့ပြောရတာက ကျွန်တော့်အမြင်ပဲ။ လက်လှမ်းမီတဲ့ပေတံတွေနဲ့ တိုင်းတော့ ကြည့်တာပဲ။ ကိုယ်တိုင်က ဘာမှမဟုတ်လေတော့ အတူတူပဲလို့ အာမဝန္တေခံ မပြောနိုင်ဘူး) နေ့လည်ခင်းကဗျာတွေက နေ့လယ်ခင်းလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကာလတရားရဲ့ စည်းရိုးအတွင်းကချည်းပဲ ကဗျာရှစ်ပုဒ်နဲ့ နေ့လည်ခင်းကို အထွေးတစ်ခုအဖြစ်တည်ဆောက်ထားတာ။ ဒီတော့ အလုံးစုံဟာ တစ်ခုတည်းသော သီးခြားသဘောဆောင်မှုအတွင်းမှာပဲ ကဗျာတွေရဲ့ နောက်ဆုံးစာကြောင်းတချို့ကို ပြပါရစေ။…
နေ့လည်ခင်း(၂) …လေထုထဲက အထိအတွေ့ကို မှတ်တမ်းရေးစဉ်
အဲဒီလိုမျိုးတွေ။ အရေးအသားရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာတန့်နေတယ်။ ရှေ့မတိုးတော့ဘူး။ ဒါပေတဲ့ ပြီးမသွားဘူး။ ပြီးမသွားသေးတဲ့အတွက် နေ့လည်ခင်း(၁)မှာပါခဲ့တဲ့ နေရောင်ခြည်ဟာ ဗာဒံရွက်ပေါ်မှာ ဆိုတာအထဲက ဗာဒံရွက်ဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။ ဘယ်ရီမင်ရဲ့ အိပ်မက်တေးတွေမှာလည်း အဲဒီလိုပဲ အဓိကပြောချင်တာ ကဗျာကို အဆုံးသတ်တာနဲ့ တန့်ထားလိုက်တာ မတူညီပုံပါ။ ဒါပေတဲ့ အိပ်မက်တေး ၃၈၅ ရဲ့ နောက်မှာတော့ နောက်ထပ် အိပ်မက်တေးမရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ သိသာတယ်။ ပေါ်လွင်နေတယ်။ ကဗျာဟာ ပြီးဆုံးသွားတဲ့ ကဗျာဖြစ်နေလို့ပဲ။ ပြီးသွား ပြတ်သွားတယ်။ ဒါပေတဲ့ အိပ်မက်တေး ၃၈၅ မှာ ပြီးဖို့ အိပ်မက်တေး ၃၈၁ ကတည်းက ပျိုးလာခဲ့တယ်။ အိပ်မက်တေးကဗျာတွေကို တောက်လျှောက်ဖတ်လာခဲ့ရင် အပြီးသတ်တော့မယ်ဆိုတာ ရိပ်မိနိုင်တယ်။ ကဗျာထဲမှာ ဟင်နရီက တဖြည်းဖြည်း ဒေါသထွက်ပြီး ကြေကွဲစရာဖြစ်လာတယ်။ (အနောက်တိုင်းရသပညာမှာပြောလေ့ရှိတဲ့ Cathasis ဖြစ်လာတယ်) နောက်ဆုံးကဗျာမှာတော့ ကဗျာတစ်ခုလုံးငြိမ်သွားတယ်။ ကဗျာထဲမှာ ဆောင်းဦးကို ရောက်လာတယ်။ သမီးလေးလည်း ကြီးလာပြီ။ အိပ်မက်တေး ၃၈၅ ရဲ့ အစပိုဒ်နဲ့ အဆုံးပိုဒ်ကို မြည်းကြည့်စေချင်တယ်။
ငါ့သမီးကလေး လေးလာပြီ။ ပေါ့ပါးတဲ့ သစ်ရွက်တွေက လေလွင့်လို့
ဘယ်တုန်းကမှ သင်းတို့ ထမပျံကြဘူး။ သင်းတို့ကကော ပျံချင်လို့လား။
ငါက သိဖို့ကောင်းတယ်။ ဟိုအဝေးတစ်နေရာမှာ တခါတုန်းက အဲဒါမျိုးတွေကို
ငါ့အိမ်က သစ်သားနဲ့ဆောက်ထားတာ၊ အတော်ကလေးကောင်းတယ်
ငါတို့လိုမဟုတ်ဘူး၊ ငါ့အိမ်က ဟင်နရီ အိမ်ထက်အိုတယ်
တကယ်လို့သာ အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ ဝိညာဉ်တွေရဲ့အကြားမှာ အလယ်အလတ်တစ်နေရာရှိခဲ့ရင်
မဟုတ်လည်း တကယ်လို့ ကောင်းကင်ပြင်ကြီးဟာ ပင်လယ်နဲ့တူခဲ့တယ်ဆိုရင်
ငါကတော့ ဒေါသတကြီးနဲ့ ဝေဖန်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
လမ်းသင့်နေလုိ့ ရှင်းပြချင်တာကလေးတစ်ခုရှိတယ်။ ဒီကဗျာဟာ ဖတ်ကြည့်လို့ နားမလည်စရာမရှိဘူး။ ဒါပေတဲ့ သူတို့ကဗျာဆရာတွေ ရေးရာမှာ ပြ ထားတာကလေးတွေကို သိရင် ကောင်းတယ်။ သူတို့ရဲ့ နွေဦး၊ နွေ၊ ဆောင်းဦး၊ ဆောင်းဟာ သူ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့သူပဲ။ နွေဦးဟာ အစ၊ ဆောင်းဟာအဆုံး၊ အဲဒီသဘောမျိုးနဲ့ သုံးကြတယ်။ ဒီကဗျာဟာ ဆောင်းရောက်တော့မ.်။ သစ်ရွက်တွေ ကြွေနေပြီလို့ပြပြီး စထားတယ်။ ဆောင်းမှာ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်၊ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်မှာ ကြက်ဆင်တွေ သတ်ပြီး စားတဲ့အလေ့ရှိတယ်။ ကြက်ဆင်တွေက သတ်စားဖို့ကို မွေးထားတာ။ ကြက်ဆင်တွေဟာ ကြက်ငှက်စာရင်းဝင်ပေတဲ့ ပျံနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဘယ်ရီမင်က မေးထားတယ်။ သင်းတို့ကတော့ ပျံချင်လို့လားတဲ့။ ဖတ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ ဆင်ခြင်ကြည့်ဖို့ အဆုံးမှာ ဟင်နရီထွက်ခဲ့ရတဲ့ ဒေါသတွေ မကျေမနပ်နဲ့ ဝေဖန်ခဲ့တာတွေဟာ အကြောင်းရှိတယ်လို့ ပြပြီး အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ လူမှန်ရင် အစွန်းတစွန်းမှာနေရတာချည်းပဲ။ နေချင်ချင် မနေချင်ချင် လူရဲ့ဖြစ်နေခြင်းကိုက တစွန်းစွန်းမှာချည်းပဲ။ ဖြစ်နေခြင်းနဲ့ ဖြစ်သင့်ခြင်းကို ခွဲပြလိုက်တာပဲ။ ရှေ့တိုးစရာကိုမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထား။ ဘယ်လိုပုံစံအခြေခံပြီး ရေးရေး ဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ ရေးရေး အဲဒီလို ရေးပြီး ပိတ်ပစ်လိုက်ရတာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ မိုးဝေးရဲ့ သမ္မတကြီးနဲ့ သုံးလေးမှတ်တိုင် မှာလည်း နောက်ဆုံး စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းဟာ ရှေ့မဆက်တော့ဘူးရယ်လို့ ရပ်ပစ်လိုက်တဲ့အနေအထားပဲ။ …မှုန်ဝါးခဲ့တယ်။ ။ ကနေ ပြီးဆုံး/ပျောက်ဆုံးသွားတော့တာပဲ။
အိပ်မက်တေးတွေထဲမှာ အိပ်မက်တေး ၁၄ ကို လူတော်တော်များများက စွဲခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း အတော့်ကို ငြိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာလို ပြန်ရေးကြည့်မိတယ်။ တချို့အပိုင်းမှာ မြန်မာတို့ရဲ့ သိမှတ်ခံစားနိုင်မှုထဲဝင်နိုင်အောင် အားထုတ်ကြည့်တယ်။ ဖြစ်ချင်မှလည်း ဖြစ်မယ်။ ဒီလို….
ဘဝ။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း၊ ငြီးငွေ့စရာကြီးပဲ၊ မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ငါတို့ မပြောသင့်ဘူး
တကယ်တော့ ကောင်းကင်က လင်းလက်ပြိုးပြက်၊ မဟာသမုဒ္ဒရာက တသတမ်းတ၊
ဒိပြင် ကလေးဘဝက ငါ့အမေက ပြောခဲ့ဖူးတာ
(အကြိမ်ကြိမ်) ငြီးငွေ့လှချည်ရဲ့လို့ ထုတ်ပြောရတယ်ဆိုရင်ဖြင့်
ဝမ်းစာမရှိလို့ဘဲ ခုနေ သတ္ထုချပြီးပြောရရင် ငါ့မှာ
ဘာဝမ်းစာမှမရှိလို့ဘဲ အကြောင်းကတော့ ငါက အလွန်ငြီးငွေ့နေတာ။
` လူတွေက ငါ့ကို ငြီးငွေ့လာစေတယ်
စာပေက ငြီးငွေ့စရာ အထူးသဖြင့် စာကြီးပေကြီးဆိုတာတွေ။
သူ့စိတ်ပျက်စရာ စောဒကတက်စရာတွေနဲ့အတူ ဟင်နရီကလည်း ငြီးငွေ့စရာ
လူတွေရယ် မျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့ အနုပညာရယ်ကို ချစ်တဲ့သူတွေက ငါ့ကို ငြီးငွေ့လာစေတယ်။
ငြိမ်းအေးတဲ့တောင်ကုန်းကလေးတွေနဲ့ ဂျင်၊ ကြည့်ရတာ ငြီးငွေ့စရာ
တနည်းနည်းနဲ့ ခွေးတကောင်က သူ့ဘာသာ သူ့အမြီးကို
မဟုတ်ရင် ပင်လယ်ဆီ၊ ကောင်းကင်ဆီသယ်သွားလေတော့
ကျန်ရစ်ခဲ့တာက ငါ၊ အမြီးနှံ့လို့။
မြန်မာလိုပြန်ရေးရာမှာ ပြောစရာရှိတာကလေးတွေ ပါတယ်။ အဲဒါက စာလုံး၊ စကားလုံး ဖလှယ်တဲ့အပိုင်း။ ဘယ်ရီမင်ဆိုလိုတာကို ပေါ်စေချင်တယ်။ Resource ကို ဝမ်းစာလို့ပဲ စာလုံးဖလှယ်လိုက်တယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ Wag ပဲ။ ဒီအင်္ဂလိပ်ဘာသာစာလုံးဟာ ပျော်ရွှင်တာကိုဆိုလိုတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ အမြီးနှံ့တာကို ပြောတာပဲ။ အမြီးနှံ့နေတယ်ဆိုတာကိုက ပျော်လို့ပဲ။ ဒီတော့လည်း အမြီးနှံ့နေတယ်လို့ပဲ ရေးလိုက်တော့တယ်။ နောက်တစ်ခုက အက်ချီးလီး(စ) ဆိုးသလိုပဲ ဆိုတာ။ အက်ချီးလီး(စ)က ရှေးဟောင်းဂရိဒဏ္ဍာရီသမိုင်းထဲက ရန်များချင်တဲ့လူ။ ကိုယ်ကျိုးကြည့်တဲ့လူ။ အဲဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီး ရေးထားတာ။ ဂျင်ဆိုတာ ယမကာတစ်မျိုး။ ဘယ်ရီမင် အတော်ကြိုက်တဲ့ စာရင်းထဲမှာ ပါတယ်။
ဘယ်ရီမင်ရဲ့ အိပ်မက်တေးကဗျာတွေကို ဖတ်ပြီး နားလည်တယ်၊ နားမလည်ဘူး ဆိုတဲ့အပိုင်း ရောက်လာခဲ့ရင်ဖြင့် အဲဒီကဗျာတွေထဲမှာ သူရေးခဲ့တာလိုပဲ။ ပြန်ပြီး ကိုးရလိမ့်မယ်။ အိပ်မက်တေး ၃၆၆ မှာ ခု လိုရေးထားတယ်။
ဒီတေးတွေဟာ နားလည်ပြီး ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မင်းနားလည်ရဲ့လား။
ဒါတွေက ခြောက်လှန့်ဖို့ ဖြေသိမ့်ပေးဖို့….။
တဲ့။ ဒါကတော့လည်း အမှန်ပဲ။ ကဗျာတွေ၊ (ဘယ်ရီမင် ကဗျာမှမဟုတ်ဘူး။ ကဗျာဆိုတဲ့ ယေဘုယျနာမ်တစ်ခုအဖြစ် သုံးနှုန်းထားတဲ့ ဘောင်အထဲက ကဗျာတွေ)ကို နာလည်ခြင်း၊ နားမလည်ခြင်းအပိုင်း ထည့်ပြီးစဉ်းစားရင် သူရေးထားသလိုပဲ၊ အနေအထားတမျိုးပြောင်းသွားမယ်။ ဘယ်ရီမင်ရဲ့ တချို့ကဗျာတွေဟာ ခုချိန်ထိအနက်မပေါ်သေးတာတွေလည်း ရှိနေသေးတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုက အင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်။ ဘယ်ရီမင်ရဲ့ ကဗျာတချို့အတွက် ဒဗင်ချီကုတ်(ဒ) Da Vinci Code လိုမျိုး ဘယ်ရီမင်ကုတ်(ဒ) Berryman Code လိုသတဲ့။ ဒါကလည်း ဖြစ်လောက်တယ်။ သူရေးထားသလို ခြောက်လှန့်တာ၊ ဖြေသိမ့်ပေးတာ ဆိုတာကို လက်ခံရယူနိုင်ဖို့ဆိုတာကိုက သူရေးထားတာကိုတော့ အနက်သိရလိမ့်မယ်။ အိပ်မက်တေးလို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ဘယ်ရီမင်ရဲ့ ကဗျာတထွေးလုံးဟာ အပျင်းပြေဖတ်စရာ ကဗျာတွေတော့လည်း မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးစတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေတာတွေပါတယ်။ သရော်ချက်တွေလည်း ပါတယ်။ ဒါပေတဲ့ ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ ကဗျာကို ငြိဖို့ ကဗျာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သိဖို့ကတော့ လိုတာပဲ။
(အရင်ကလည်း ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖူးသေးတယ်။ အယ်လင်ဂျင်း(စ)ဘာ့ရဲ့ ကဗျာနဲ့ပတ်သတ်လို့ သူ့ကဗျာ ကိုယ့်အတွေး၊ သူ့အရေး ကိုယ့်အသိ ဆိုတဲ့ အရေးအသားနဲ့ ဝေါလေ့(စ)စတီဗင်(စ)ရဲ့ Peter Quince at the Clavier အကြောင်း ရေးထားတာ ရှိတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်ဖြင့် ရှာဖွေဖတ်ကြည့်ကြပါ။ )
Labels: မြင့်သန်း၏ စာများ, ခေတ်ပေါ်ကဗျာ စာတမ်း, ဆောင်းပါး